Ch 13 मत्ती – 2माछा
घर / बाइबल / मत्ती को सुसमाचार / Ch 13 मत्ती
13:1 त्यो दिन मा, येशूले, घरमा देखि प्रस्थान, समुद्र छेउमा बसे.
13:2 र यस्तो ठूलो भीड उहाँले एक डुङ्गामा चढेका भनेर उहाँलाई जम्मा गरियो र उहाँले बसे. र सम्पूर्ण भीड किनारमा उभिए.
13:3 अनि उहाँले Parables मा तिनीहरूलाई धेरै कुरा बोल्नुभयो, यसो: "हेर, एक छर्ने बीउ छर्न गए.
13:4 अनि उहाँले रोपेको बेला, केही सडक छेउमा गिर, र हावा को चरा आए र यसलाई खाए.
13:5 त्यसपछि अरूलाई ढुङ्गे ठाउँमा गिर, उनि धेरै माटो थिएन जहाँ छैन. र तिनीहरूले द्रुत फस्टाइरहेका, किनभने उनीहरू माटो को कुनै गहिराई थियो.
13:6 तर सूर्य उठेर जब, तिनीहरूले झुलसे थिए, किनभने तिनीहरूले कुनै जरा थियो, तिनीहरूले withered.
13:7 अझै पनि अरूलाई काँडा बीचमा फसे, र काँडा वृद्धि र तिनीहरूलाई suffocated.
13:8 यद्यपि केही अरूलाई राम्रो माटो मा गिर, र तिनीहरूले फल उत्पादन: केही एक सय गुना, केही साठी गुना, केही तीस गुना.
13:9 जसले सुन्न कान छ, उहाँलाई सुन्न गरौं। "
13:10 र उहाँका चेलाहरू उहाँलाई नजिक र भन्नुभयो, "तिमी किन Parables तिनीहरूलाई कुरा गर्छन्?"
13:11 प्रतिक्रिया, उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो: "यो तपाईं दिइएको छ किनभने स्वर्गको राज्यको रहस्य थाहा, तर यो तिनीहरूलाई दिइएको छैन.
13:12 जसले छ लागि, उसलाई दिइएको गरिनेछ, र उहाँले प्रशस्त मात्रामा हुनेछ. तर जसले छैन, के पनि त्यो उहाँबाट लगिएको गरिनेछ छ.
13:13 यस कारण, म Parables तिनीहरूलाई कुरा: किनभने देखेर, तिनीहरूले देख्नुभएन, र तिनीहरूले सुन्न छैन सुनेपछि, न त तिनीहरूले बुझ्न के.
13:14 अनि त, तिनीहरूलाई मा यशैयाको भविष्यवाणी पूरा हुन्छ, जसले यसो भने, 'सुनवाई, तपाईं सुन्नु हुनेछ, तर बुझ्न; र देखेर, तपाईं देख्ने, तर बुझ्ने छैन.
13:15 यो मान्छे को दिल को लागि बोसो फलेको, र आफ्नो कान तिनीहरूले भारी सुन्न, र तिनीहरूले आँखा बन्द छन्, कुनै पनि समयमा नत्र तिनीहरूले आँखाले देख्न सक्छ, र आफ्नो कान सुन्न, र आफ्नो हृदयले बुझ्न, र रूपान्तरित, त्यसपछि म तिनीहरूलाई निको पार्न हुनेछ। '
13:16 तर अनमोल आफ्नो आँखा छन्, तिनीहरूले हेर्न किनभने, र आफ्नो कान, तिनीहरूले सुन्न किनभने.
13:17 Amen म तिमीहरूलाई भन्दछु, पक्कै पनि, अगमवक्ताहरूमा धेरै र बस तपाईं के हेर्न हेर्न चाहेको, तैपनि तिनीहरू यसलाई देख्न गरे, तपाईं के सुन्न सुन्न, तैपनि तिनीहरू यो सुनिन.
13:18 सुन्नुहोस्, त्यसपछि, छर्ने को दृष्टान्त गर्न.
13:19 राज्यको शब्द सुन्नुहुन्छ र यो बुझ्न गर्दैन जो कोहीले साथ, दुष्ट आउँछ र आफ्नो हृदयमा छरिएको थियो के टाढा वहन. यो सडकको छेउमा बीउ प्राप्त गर्ने उहाँ.
13:20 त्यसपछि जसले एक चट्टानी स्थान मा बीउ प्राप्त गरेको छ, यो शब्द सुन्नुहुन्छ गर्ने छ र द्रुत आनन्द यसलाई स्वीकार.
13:21 तर उहाँले कुनै मूल छ, त्यसैले यो एक समय को लागि मात्र हो; त्यसपछि, जब कष्ट र सतावटको किनभने शब्द को उत्पन्न, उहाँले द्रुत stumbles.
13:22 र जसले thorns बीच बीउ प्राप्त गरेको छ, यो शब्द सुन्नुहुन्छ जसले छ, तर यो उमेर को ख्याल राख्नुहुन्छ र धन को falseness शब्द निसासिनु, र उहाँले फल बिना प्रभावकारी छ.
13:23 यद्यपि साँच्चै, जसले राम्रो माटो मा बीउ प्राप्त गरेको छ, यो शब्द सुन्नुहुन्छ जसले छ, र यो बुझ्नुहुन्छ, र त त्यो फल फलाउँछ, र उहाँले उत्पादन: केही सय गुना, र अर्को साठी गुना, र अर्को तीस गुना। "
13:24 उहाँले तिनीहरूलाई अर्को दृष्टान्त प्रस्तावित, यसो: "स्वर्गको राज्य आफ्नो क्षेत्रमा राम्रो बीउ छर्न मानिस जस्तै छ.
13:25 तर मानिसहरू सुतिरहेको बेला, आफ्नो शत्रु आयो र गहुँको बीच सामा छर्न, र त्यसपछि दूर भयो.
13:26 र बिरुवाहरु गर्दा हुर्किसकेका थिए, र फल उत्पादन भएको थियो, त्यसपछि सामा पनि देखा.
13:27 परिवारको पिताको त सेवकहरूको, आउँदै, उहाँलाई भने: 'प्रभु, तपाईं आफ्नो क्षेत्रमा राम्रो बीउ छर्न गर्नुभयो? त्यसपछि कसरी सामा छ कि यो छ?'
13:28 अनि उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, 'शत्रु हो मानिस यस गरेको छ।' को सेवकहरू उहाँलाई भने त्यसैले, 'यो हामी जाने र तिनीहरूलाई भेला हुनुपर्छ भनेर आफ्नो इच्छा छ?'
13:29 अनि उहाँले भन्नुभयो: 'कुनै, नत्र सायद सामा भेला मा, तपाईं पनि बाहिर गहुँ यसलाई साथ सँगै उखेल्ने सक्छ.
13:30 अनुमति दुवै बाली सम्म बढ्न, र कटनीको समयमा, म reapers गर्न भन्नेछन्: पहिले सामा भेला, र बाल्न बन्डलहरूको तिनीहरूलाई बाँध्न, तर गहुँ मेरो धनसारमा भेला हुन्छन्। ' "
13:31 उहाँले तिनीहरूलाई अर्को दृष्टान्त प्रस्तावित, यसो: "स्वर्गको राज्य तोरी बीउ एक अन्न जस्तै छ, जो मानिस र उनको क्षेत्रमा छर्न.
13:32 यो छ, साँच्चै, सबै बीउ को कम से कम, तर जब यो हुर्किसकेका छ, यो सबै बोट भन्दा ठूलो छ, र यो एक रूख बन, धेरै हावा को चरा आउन र यसका हाँगाहरू बास भनेर। "
13:33 उहाँले तिनीहरूलाई अर्को दृष्टान्त बताउनुभयो: "स्वर्गको राज्य खमिर जस्तो हो, एक महिला लिए र असल गहुँको पीठो तीन उपाय मा लुकाए जो, यो पुरा leavened थियो सम्म। "
13:34 यी सबै कुराहरू येशूले भीडलाई गर्न Parables बोले. र उहाँले तिनीहरूलाई अलग Parables देखि बोल्न भएन,
13:35 अगमवक्ता बोल्नुभएको थियो के पूरा गर्न, यसो: "म Parables मेरो मुख खोल्न हुनेछ. म संसारको जग देखि लुकाइएको छ के घोषणा हुनेछ। "
13:36 त्यसपछि, भीडलाई खारेज, उहाँले घर गए. र उहाँका चेलाहरू उहाँलाई नजिक, यसो, "हामीलाई खेतमा सामा को दृष्टान्त व्याख्या गर्नुहोस्।"
13:37 प्रतिक्रिया, उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो: "असल बीउ sows जसले मानिसको छोरा हो.
13:38 अब क्षेत्र दुनिया छ. र असल बीउ राज्यका छोराहरू छन्. तर सामा दुष्टताको छोराहरू हुन्छन्.
13:39 त्यसैले तिनीहरूलाई छर्न गर्ने शत्रु शैतानको छ. र साँच्चै, बाली काट्ने उमेर को Consummation छ; जबकि reapers स्वर्गदूतहरू हुन्.
13:40 त्यसैले, जस्तै सामा अप भेला र आगोमा भस्म छन्, त्यसैले यो उमेर को Consummation मा हुनेछ.
13:41 मानिसको पुत्र आफ्ना स्वर्गदूतहरूलाई बाहिर पठाउन हुनेछ, र तिनीहरूले आफ्नो राज्य बाट भेला हुनेछ हराउनु नेतृत्व गर्ने सबै र काम iniquity गर्नेहरूलाई.
13:42 अनि उहाँले आगोको भट्टीमा तिनीहरूलाई फ्याँकिएको हुनेछ, त्यहाँ रोइरहेका हुन कहाँ र हुनेछ दाँत को gnashing.
13:43 त्यसपछि बस व्यक्तिहरूले सूर्य जस्तै चमक हुनेछ, आफ्नो पिताको राज्यमा. जसले सुन्न कान छ, उहाँलाई सुन्न गरौं.
13:44 स्वर्गको राज्य एक क्षेत्रमा लुकेको एक धन जस्तै छ. जब मानिस यो पाता, त्यो लुकाउँछ, र, किनभने आफ्नो आनन्दको, उहाँले जान्छ र त्यो छ कि सबै बेच्छ, र त्यो क्षेत्र किन्छ.
13:45 फेरि, स्वर्गको राज्य असल मोती खोज्दै व्यापारी जस्तै छ.
13:46 भएको ठूलो मूल्य एक मोती फेला, उहाँले टाढा गए र उहाँले थियो त्यो बिक्री, र त्यो किनेको.
13:47 फेरि, स्वर्गको राज्य समुद्रमा एक नेट डाली जस्तै छ, जो माछा सबै प्रकारका सँगै बटोरता.
13:48 जब यो भरिएको छ, यसलाई चित्रकला र किनारमा छेउमा बसिरहेका, तिनीहरूले भाँडाहरू मा राम्रो चयन, तर खराब तिनीहरूले टाढा फाले.
13:49 त्यसैले यो उमेर को Consummation मा हुनेछ. स्वर्गदूतहरूले निस्कनेछ र बस को बीचमा देखि खराब अलग हुनेछ.
13:50 र तिनीहरूले आगोको भट्टीमा तिनीहरूलाई फ्याँकिएको हुनेछ, त्यहाँ रोइरहेका हुन कहाँ र हुनेछ दाँत को gnashing.
13:51 तपाईंले यी सबै कुराहरू बुझे?"तिनीहरूले उहाँलाई भन्न, "हो।"
13:52 उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, "त्यसैले, स्वर्गको राज्य बारेमा हरेक शास्त्राी राम्ररी सिकाउनुभयो, मानिस जस्तै छ, एउटा परिवारको बाबु, जो नयाँ र पुरानो दुवै आफ्नो गोदाम देखि प्रदान गर्दछ। "
13:53 र यो पनि त्यस्तै भयो, येशूले यी Parables पूरा गरेको थियो जब, उहाँले त्यहाँ टाढा गए.
13:54 र आफ्नै देशमा आइपुगेपछि, उहाँले आफ्नो सभाघरहरूमा तिनीहरूलाई सिकाउनुभयो, यति भनेर तिनीहरूले छक्क परे र यसो भने: "यस्तो बुद्धि र शक्ति कसरी यो एक साथ हुन सक्छ?
13:55 एक workman यस छैन छोरा छ? उहाँको आमा मरियम भनिन्छ, र आफ्ना भाइहरूलाई, याकूब, र यूसुफ, र सिमोन, र यहूदा?
13:56 र आफ्नो बहिनीहरूले, तिनीहरूले हामीलाई साथ सबै छन्? त्यसैले, जहाँ यो एक प्राप्त छ यी सबै कुराहरू देखि?"
13:57 र तिनीहरूले उसलाई ठेस लाग्यो. तर येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, "एक अगमवक्ता सम्मान बिना छैन, आफ्नै देशमा बाहेक र आफ्नै घरमा। "
13:58 र उहाँले त्यहाँ धेरै चमत्कार काम गरेन, किनभने आफ्नो unbelief को.